हात जिप्सम बनेको: आफ्नै हात सुन्दर र शानदार तत्व सिर्जना गर्न।
कला र मनोरंजन, कला
कसैलाई प्रेम एक एक रोचक, मूल यसबाहेक, आफ्नै हातले बनाएको कुरा, दिन सक्नुहुन्छ? उच्च सम्भावना हामी जो चाहते ती धेरै पाउन भनेर भन्न सकिन्छ। आखिर, क्षण मात्र होइन मनपर्ने उपहार प्राप्त व्यक्ति, आफ्नो आनन्द र उहाँलाई लागि कृतज्ञता, तर पनि आवश्यक स्मारिका को उत्पादन को लागि प्रक्रिया व्यक्त गर्दा।
यो प्लास्टर मा हात प्रयोग गर्न सकिन्छ रूपमा?
जिप्सम जो त्यहाँ सुन्दर र शानदार उत्पादन सिर्जना आफ्नो कल्पना महसुस गर्न मौका सधैं छ, एउटा अचम्मको सामाग्री सकिन्छ। यो संग तपाईं आफैलाई यस्तो कुरा एक मास्क, फूलदान, मूर्तिकला, आदि रूपमा गर्न सक्छन् यो समीक्षा हामी प्लास्टर एक हात कसरी बनाउने केन्द्रित हुनेछ।
महिला आफ्नो धेरै सजावट पकड एक प्लास्टर हात प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरूले उत्पादन को यस प्रकारको मा महान हुनेछ। र सहायक जस्तै मानिसहरू लाभ उठाउन सक्छौं। प्लास्टर को हात मा आफ्नो कुञ्जीहरू र विभिन्न trinkets रचनाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जिप्सम उत्पादनहरु धेरै को प्रयोग गर्दछ। तर आवेदन सजिलो क्षेत्र भित्री को हात को डिजाइन छ। यस्तो विवरण रोचक र एकदम एक मानक पूर्ण कुनै पनि stylistic निर्देशन मा फिट जो वाहेक, बन्न सक्छ।
जिप्सम को एक मिश्रण तयारी
उत्पादन गर्न, तपाईंले राम्ररी एक प्लास्टर समाधान बनाउन मुद्दा भेट्नुपर्छ गर्न आवश्यक छ। उहाँले उच्च गुणवत्ता पूरा भने, गर्दैन र शिल्पकृति लामो समय रहन, तर छोटो अवधि पछि अलग पतन हुनेछ। यसलाई कुनै पनि विशेष क्षमता लिन आवश्यक छ। चयन गरिएको कन्टेनर, तपाईं पाउडर थप्नु पर्छ। कि पछि यो राम्रो परिणाम समाधान जगाएर गर्दा बिस्तारै, तरल कन्टेनर मा हालिएको आवश्यक छ। यो मिश्रण को परिणाम गांठ को घटना, र रोक्न सक्नुहुन्छ , आफ्नै हातले प्लास्टर मा हात सिर्जना, को भित्री को एक योग्य सजावट हुनेछ।
प्लास्टर एक हात निर्माण को पहिलो विधि
यो पहिलो नजर मा जस्तो हुन सक्छ रूपमा एक हातमा छैन त्यसैले गाह्रो छ बनाउने। हतियार को निर्माण वा केही ठूलो लागि प्लास्टर देखि मूर्तिहरु आफ्नो हातले, तपाईं एक राम्रो प्रशिक्षण कार्य क्षेत्र आवश्यक हुनेछ। उपयुक्त सामाग्री देखि सिर्जना डाली माटो को ठूलो रकम को उपस्थिति entails। तपाईं पुरानो समाचार पत्र, वा कुनै पनि अनावश्यक oilcloth राख्नु काम गर्न एक ठाउँ आवश्यक किन छ। प्लास्टर हात को निर्माण को लागि निम्न उपकरण आवश्यक: पीठो, प्लास्टर, पट्टी कैंची।
पीठो केहि ट्यांक पानी मा भंग गर्न पहिलो आवश्यकता मा, gruel को प्रकारको प्राप्त गर्न। यो एक र्याप हात पट्टी पछि र काम गर्न प्राप्त भएको छ। पीठो mush संग परिणामस्वरूप मिश्रण पानी राम्ररी आफ्नो हात मा पट्टी र राम्रो ड्राई भन्दा लागू गर्नुपर्छ। हेअर ड्रायर संग सुखाने को दर वृद्धि गर्न।
परिणामस्वरूप उत्पादन सुकाएपछि, तपाईं कैंची यसलाई कटौती गर्न आवश्यक छ। यो औँलामा तल गर्न ब्रश को दिशा मा गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो आफ्नो हात मुक्त गर्न सम्भव हुनेछ। सबै गरिन्छ गर्दा, तपाईंले गढ सहायक वृद्धि गर्नुपर्छ। यो लेआउट लागि पट्टी संग र्याप र त्यसपछि पीठो र पानी को एक मिश्रण ढाकिएको छ।
लेआउट पूर्ण सुक्खा र राम्रो बलियो प्राप्त गर्न पर्याप्त छ जब एक समयमा, तपाईं अर्को चरणमा अगाडि बढ्न गर्नुपर्छ। यो एक प्लास्टर समाधान पहिले डिजाइन लेआउट भर्न आवश्यक छ। बित्तिकै उत्पादन पूर्ण सुक्खा छ रूपमा, तपाईं पीठो र पानी जमे पेस्ट रूपमा सेवा गर्दैछन् जो बाहिरी खोल, देखि जारी गर्न आवश्यक हुनेछ। उत्पादन को प्लास्टर भाग बिगार्न छैन क्रममा, यो कैंची संग शीर्ष तह को हटाउनु आफ्नो सबै सटीक संग हुनुपर्छ। यो पहिलो विधि, घर प्लास्टर मा हात हुनेछ जसमा, आफ्नै हातले बनाएको थियो।
प्लास्टर एक हात सिर्जना गर्न दोस्रो तरिका
बहुमूल्य कुराहरू वा प्राप्त गर्न सरल कुराहरू प्रयोग गर्न सरल आभूषण आवश्यकता को एक स्टाइलिश डिजाइन होल्डर सिर्जना गर्न पनि गाह्रो छैन। त्यसैले, के सामाग्री र उपकरण यो मामला मा आवश्यक हुनेछ:
साधारण रबर पन्जा।
प्लाईवुड को छैन पनि ठूलो पाना।
Adhesive समाधान छ।
एक धेरै रोचक embodiment दुई आकार प्रत्येक अन्य फरक जो, तुरुन्तै पन्जा प्रयोग गरेर प्राप्त भएको छ। कुनै कम प्रत्येक अन्य (केवल रंग र आकार) बाट व्यावहारिक फरक नगर्ने प्लास्टर बाहिर ती हात, हेर्न ठूलो हुनेछ। मात्र होइन केवल पन्जा प्रत्येक अन्य फरक आकार पनि तिनीहरूलाई लागि धारकों हुन, तर गर्नुपर्छ भनेर बुझ्न आवश्यक।
के एउटा मूल उत्पादन सिर्जना गर्न गरिन आवश्यक?
पहिले, यो प्लाईवुड सानो सर्कलमा कटौती गर्नुपर्छ। यसको व्यास पूर्णतया चयन पन्जा तल पालना गर्नुपर्छ। उसलाई टास्ने समाधान प्रयोग, कट-बाहिर प्वालहरू किनारा संलग्न हुन आवश्यक छ। दोस्रो, जिप्सम र पानी वजन पहिल्यै सिर्जना पहिले तयार मोल्ड मा खन्याउन आवश्यकता। यो उत्पादन उचाइ जलसेक तरल को मात्रा मा सम्पूर्ण निर्भर गर्नेछ बुझ्ने गरिन्छ। तेस्रो, उत्पादन पूर्ण सुक्खा हुँदा, पन्जा कटौती र कठोर हात बाट हटाउन आवश्यक हुनेछ।
उत्पादन पूर्ण तयार छ र यसको शान आनन्दित सक्नुहुन्छ!
फलस्वरूप, माथि विधिहरू सबै प्लास्टर मा राम्रो निफ्टी सुम्पनुहुनेछ। आफ्नै हात उत्पादन, यस समीक्षा, छिटो र सजिलै सिर्जना देखि स्पष्ट छ। सुविधाजनक होल्डरलाई नयाँ विचार छैन Suffice। तर, यो कल गर्न नसकेको काम गर्दैन प्लास्टर को हात जस्तै आभूषण को एक किसिम, भण्डारण लागि एक महान समाधान बन्न सक्छ किनभने कंगन, हेर्छ र छल्ले। यसबाहेक, यस्तो सहायक एकदम सजिलै राम्रो होल्डर र यस्तो हार, मोती र चश्मा जस्तै आइटम लागि पर्याप्त ठूलो बन्न सक्छ।
Whichever विधि तपाईं द्वि निर्माण हात सुन्दर र रमणीय उत्पादनहरु पलिश सहायक गर्न आवश्यक प्राप्त गर्न छनौट। यसो गर्न, तपाईं ठीक स्यान्डपेपर प्रयोग गर्नुपर्छ। विशेष ध्यान ठूलो अनियमितताहरु छ स्थानहरु भुक्तान गर्नुपर्छ। साथै, जिप्सम उत्पादन रङहरू आवेदन बारे मा भूल छैन। यस मामला मा, यो आफ्नै प्राथमिकताहरू द्वारा मात्र निर्देशित हुनु आवश्यक छ। यो एक सानो कल्पना देखाउनुपर्छ, र परिणाम एकदम उच्च कार्यक्षमता मात्र यसको सौन्दर्य लागि हडताली, तर पनि। कसरी हात आफ्नो हातमा प्लास्टर बनाइएका सिर्जना गर्न यो प्रश्न मा सबै केहि हल!
यस चित्रकला "लस Meninas" पिकासो: विवरण, इतिहास र समीक्षा। पाब्लो पिकासो गरेको "लस Meninas। Velasquez अनुसार", 1957
वास्तु शैली: पत्थर मा कला
अन्तिम साँझ मा दृष्य: सुविधा र सिफारिसहरू
कसरी चरा चेरी आकर्षित गर्न? उदीयमान कलाकारहरूको लागि धेरै तरिका
बिस्तारै पेन्सिल जनावरको कसरी आकर्षित गर्न? जनावर कसरी आकर्षित गर्न
10 सप्ताह 'gestation मा गर्भपतन: कहाँ नतिजा के
नासपाती "मह": विवरण, हेरविचार को विशेषताहरु
Rhubarb र अन्य व्यञ्जन को बोट बाट को Compote
जोडे कुल dwellings को पुनर्जनन मा बनाउन 10 गल्ती
बगैंचामा बैजनी फूल - एक शानदार र आकर्षक
"द हिड्ने मृत": सिजन7को डाली। "द घूमन मृत": रोचक तथ्य र विवरण
ग्याँस इंजेक्शन - यो के हो? सङ्केत गर्छ, contraindications, समीक्षा
प्रमाणपत्र ST-1: यो के हो? मूल प्रमाणपत्र
अरोकोडोबाट "ग्यारामोल" ग्रोटम र मसालेदार चटनी
Keratin - एक ... Keratin बाल: समीक्षा, मूल्यहरू
कुन औंलामा साइन इन गर्नुपर्दा - शक्ति र शक्तिको प्रतीक?